Archive - कान्तिपुर समाचार
डा. कमल लामिछाने, मंसिर ५, २०७४
प्रा.डा. ऋषिकेश नारायण श्रेष्ठ, मंसिर ५, २०७४
पविता मुडभरी पुडासैनी, मंसिर ५, २०७४
डा. उमाशंकर प्रसाद, मंसिर ५, २०७४
७२ घण्टाअघि सीमा सिल
प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको दोस्रो चरण चुनावको ७२ घण्टाअघि नै नेपाल–भारतको सीमा सिल गरिने भएको छ । भारत, विहारको सीतामढीमा सोमबार दुवै देशका सुरक्षा अधिकारीका बीचमा भएको सीमा बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो ।
बढ्यो चुनावी चुनौती
कान्तिपुर टिम, मंसिर ५, २०७४
संखुवासभाको चैनपुरमा अज्ञात समूहले ल्यान्डरोभर जिपमा आगजनी गरेका छन् । सोमबार बिहान २ बजे को१ज २१२३ नम्बरको जीपमा आगजनी भएको हो । चैनपुरका आशिष शाक्यको बसपार्क नजिकै पार्किङमा राखिएको गाडी आगजनी भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
सुरक्षा प्रमुख जिल्ला दौडाहामा
सुरक्षा निकायका क्षेत्रीय प्रमुख र निर्वाचन आयुक्तले प्रदेश ४ का विभिन्न जिल्लाको अनुगमन थालेका छन् । मंसिर १० मा हुने पहिलो चरणको प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन प्रक्रियाको तयारी, सुरक्षा अवस्था र आचारसंहिता पालना भए/नभएको बारे अध्ययनका लागि टोलीले सोमबारदेखि अनुगमन थालेको हो ।
फेका कप फुटबल
शुक्रबार सुरु हुने १२ औं फेका कप अन्तरस्कुल छात्र फुटबलमा १६ टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् । विजेताले २० र दोस्रोले १५ हजार पुरस्कार पाउने छन् ।
एभरेस्ट प्रिमियर लिगको टोली ललितपुर प्याट्रियट्सले गैरसरकारी संस्था वाटरएडसँग सहकार्य गर्ने भएको छ । ललितपुरे टोलीले संस्थाको ‘पिरियड पावर’ नामक अभियानअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रममा सहयोग गर्नेछ ।
प्रथम अल्फा बिटा अन्तरकलेज फुटसल प्रतियोगितामा १६ टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् । स्पर्धा बुधबार सुरु हुनेछ ।
नेपालगन्ज म्याराथन आज
शान्ति सम्झौता भएको दिनको सम्झनामा नेपालगन्जमा प्रत्येक वर्ष हुँदै आएको नेपालगन्ज म्याराथन तेस्रो संस्करण मंगलबार हुँदै छ । क्रियटिभ ह्यान्ड्स ग्रुपले गर्ने प्रतियोगिता विजेताले ५५ रुपैयाँ पाउने छन् । स्पर्धामा ६ सय बढीको सहभागिता रहने आयोजकले जनाएको छ ।